Senator Iftin Xasan Paasto : – ” Dowladda federalka waxay faragelin iyo burburin ku heysaa Jubbaland. | puntlandi.com
Senator Iftin Xasan Paasto : – ” Dowladda federalka waxay faragelin iyo burburin ku heysaa Jubbaland.
Senator Iftin Xasan Baasto oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ayaa uga digay Xukuumadda faragelinta lagu haayo Maamulka Jubbaland, isagoo sheegay inay ka war heleen duleelo dhanka Xukuumadda ka socda oo ka dhan ah maamul goboleedyada.
Senator Iftin Xasan Baasto ayaa ugu baaqay Xukuumadda inay ka digtoonaato arrimaha ay wado Xukuumadda, isagoo xusay inuu isaga ka mid yahay Senatarada laga soo doortay Jubbaland, isla markaana aanay raalli ka noqoneyn waxyaabaha qaar.
“Anaga waxaa nahay Senatorada Aqalka Sare ee laga soo doortay Jubbaland oo aan ku matalnaa dowladda Federaalka, waxaa leenahay Xukuumadda ha iska ilaaliso dul duleedaha faraha badan iyo doc faruurka ay wado, marna ma ogolaaneyno faragelin wax burburin ah”ayuu yiri Iftin Xasan Baasto oo wareysi siiyay warbaahinada Muqdisho.